Kuita kuti saiti iyi ishande nemazvo, tinogona kuisa dhata dhata mafaera anonzi makuki pane chako kifaa. Mazhinji mawebhusaiti anoita izvi.
Cookie idiki diki faira rinochengetwa newebsite pakombuta yako kana nharembozha paunoshanyira saiti. Inoita kuti webhusaiti irangarire zviito zvako uye zvaunofarira (senge login, mutauro, saizi yefonti uye zvimwe zvido zvekuratidzira) kwenguva yakati, saka haufanire kuramba uchidzipindazve pese paunodzoka saiti kana bhurawuza kubva kune rimwe peji uchienda kune rimwe.
Ndeapi makuki akaiswa nekushanyira saiti yedu?
Saka iwe unogona nyore "Kufanana" kana kugovana zvirimo zvedu pane zvinofarira zveFacebook neTwitter isu takasanganisira kugovana mabhatani pane yedu saiti.
Izvo zvinotarisirwa padziviriro pane izvi zvichasiyana kubva pakusangana kwevanhu kuenda kunzvimbo dzekugarisana nevanhu uye zvichave zvakatarisana nezvirongwa zvepachivande zvawakasarudza pane mitambo iyi.
Saiti Kuvandudza Makuki
Isu tinogara tichiedza zvigadzirwa zvitsva kana zvesaiti maficha pane yedu saiti. Isu tinoita izvi nekuratidza akati siyanei mavhezheni ewebhusaiti yedu kuvanhu vakasiyana uye tisingazivikanwe tichitarisa kuti vashanyi vesaiti yedu vanopindura sei idzi dzakasiyana shanduro. Pakupedzisira izvi zvinotibatsira kuti tikupe iwe webhusaiti irinani.
Mushanyi Statistics Cookies
Isu tinoshandisa makuki kuunganidza nhamba dzevashanyi senge vanhu vangani vakashanyira webhusaiti yedu, rudzii rwetekinoroji yavari kushandisa (semuenzaniso Mac kana Windows iyo inobatsira kuona kana yedu saiti isiri kushanda sezvainofanirwa kune mamwe matekinoroji), yakareba sei ivo vanopedza pane saiti, ndeipi peji ravanotarisa nezvimwe. Izvi zvinotibatsira kuti tirambe tichivandudza webhusaiti yedu. Izvi zvinonzi "analytics" zvirongwa zvinotitaurirawo kuti vanhu vakasvika sei pane ino saiti (semuenzaniso kubva kuchinjini chekutsvaga) uye kuti vanga vari pano vasati vatibatsira here kuisa mari yakawanda mukugadzira masevhisi edu kwauri pane kushambadzira kushandisa.
Unogona kuona kuti dzimwe nguva mushure mekushanyira saiti iwe unoona yakawedzera nhamba yemashambadziro kubva kune saiti yawakashanyira. Izvi zvinodaro nekuti vanoshambadzira, kusanganisira isu pachedu tinobhadhara aya ma ads. Iyo tekinoroji yekuita izvi inogoneswa nemakuki uye nekudaro tinogona kuisa izvo zvinonzi "kumakisazve kuki" panguva yekushanya kwako. Isu tinoshandisa izvi kushambadza kupa kwakakosha kupa nezvimwe kukukurudzira kuti udzokere kune yedu saiti. Usatombo kunetseka isu hatigone kuenderera mberi tichisvika kwauri sezvo danho rese risingazivikanwe zvachose. Unogona kusarudza kubva pakuki idzi chero nguva.
Email Tsamba Cookies
Nzvimbo ino inopa tsamba kana mabhizimisi ekubhadhara mazano uye makiki anogona kushandiswa kuyeuka kana iwe wakatorejesa uye kana kuratidza zvimwe zviziviso zvinogona kungoshanda kune vanyori vabhadhara / vasina kubhadhara.
Ungadzora sei makuki?
Iwe unogona kudzora uye / kana kudzima makuki sezvaunoda - kuti uwane ruzivo, ona nezvecookies.org. Unogona kudzima makuki ese atove pakombuta yako uye unogona kuseta akawanda mabhurawuza kuti avadzivise pakuiswa. Kana iwe ukaita izvi, zvakadaro, iwe ungatofanira kugadzirisa manyore zvimwe zvaunofarira nguva dzese paunoshanyira saiti uye mamwe masevhisi uye zvinoshanda zvingasashande.